Leyla Cali Cilmi: Siyaasiyad soomaaliyeed oo u sharaxan baarlamaanka dalka Iswiidhan | Somaliska
Af-Soomaali / Siyaasada / Somaliska
Iyadoo doorashada dalkaan Iswiidhan ee leh heerka gobol, degmo iyo baarlamaan lugu wado inuu dhaco bisha sibteembar ee sanadkan, ayaa waxaa haatan biloowday ololaha ay durba bilaabeen qaar ka mid ah musharaxiinta u tarameeysa qeeybahaasi kala duwan kuwaas oo ka tirsan asxaabta siyaasadeed ee dalka.
Haddaba gobolkan Göteborg, ayaa waxaa sanadkan baarlamaanka u sharaxan siyaasad soomaaliyeed oo ka tirsan xisbigga deegaanka ee Miljöpartiet-ka loo yaqaano. Layla Cali Cilmi, waxaa siyaasiyad da’yar oo ku kortay dalkaan Iswiidhan islamarkaasina ah xubin ka ah gollaha deegaanka degmadda Angered ee xisbiga Deegaanka una sharaxan baarlamaanka.
Wareysi qaas ah siisay shabakadda Somaliska.com iyo radio Somaliweyn ee dalkaan Iswiidhan kaga warantay arrimo badan oo ay ka mid yhiiin sababihii ay isku sharaxday. Leyla ayaa sheegtay in ay jirto baahi ay ummadda soomaaliyeed u qabto ku dhex muuqashadda siyaasadda oo ay ka mid yihiin dadyowga tiradda yar ee dalkan.
“Waxaanu nahay dad soddon sanno iyo ka badan ku nool dalkaan oo laga tiro badan yahay diintooduna tahay islaam, waxaanu nahay dad dalkaan hadda sii joogayo oo dalkoodii labaad yahay, ayan ii muuqdaan in ubadkeennu aannu heeysan dad ku matala saaxadda siyaasadeed, bulsho walbana waxeeyy u baahan tahay cid ku matasha saaxadda guud. Soomaaliduna waa isku baahi oo ay wax badani ka dhaxeeyaan, taas ayaa keentay inaan isku xilqaamo” ayey tiri Leyla oo ka jawaabeeysay su,aal aheyd maxaa kugu kalifay inaad siyaasadda soo gasho.
Leyla ayaa ku soo biirtay siyaasadda doorashadii dalkaan ka dhacday 2o14-tii, oo markaas ay xubin ka aheyd xisbigga Deegaanka ee gollaha deegaanka Angered, waana shaqsigii ugu horeeyey ee soomaali ah oo gala gollaha deegaanka ee degmadaasi. Leyla oo wareysigeeda kaga hadashay in badan wax qabadka xisbigeeda iyo sidda uu soomaalida eheladooda ka maqnaa la isku keeni lahaa doorashadii hore ka hor intaan xisbigga aannu awoodiisi gobolka hoos u dhicin.
Inkastoo xisbigga deeganka haatan yahay xisbiga afaraad oo aan laheyna awood marka la eeggo xisbiga cunsuriga ah ee SD iyo saameeynta siyaasadeed ee uu leeyahay, ayey Leyla farta ku fiiqday in xisbigga ay xubinta ka tahay yahay xisbi ka shaqeeya danaha soomaalida, sidaa daraadeedna ku boorisay in la taageero.
Leyla waa siyaasiyad aad u daneeysa siyaasadda howlaha guriyeynta, waxaana ay aad u tilmaantay baahida xagga guryaha ee jira iyo guryaha haatan dhismaha xoogan lugu wado eeysan u aheyn huryo loogu talagalay qoysaska waa weeyn ee ka kooban 7 ruux iyo ka badan.
Ugu dambeyntii inkastoo ay Leyla ka hadashay arrimo kala duwan oo ku saabsan xisbigeeda iyo waxdciga xalaadda guud ahaaneed ee xilligan, hadana ma sheegin ajandaheeda siyaasadeed oo toos ah, balse waxaa ay sheegtay in ay dooneeyso in ay noqoto siyaasiyad isku xirta bulshadda soomaaliyeed ee dalkaan iyo dowladda dalka islamarkaasina ka shaqeeyn doonta danaha ummadda soomaaliyeed. Leyla ayaa la filayaa ineey dhawaan soo gudbin doonto waxyaabaha ay qaban doonto haddii ay ka mid noqoto xildhibaanada baarlamaanka Iswiidhan.
Gabadhii ugu horeysay ee Xijaab xiran oo ku biirtay dab damiska Sweden